Maitiro ekugadzirisa kutonga kweAirPods muIOS 11 | IPhone nhau
AirPods yanga iri imwe yezvigadzirwa zveApple zvinorumbidzwa mumakore achangopfuura. Yayo compact saizi, inopfuura inogamuchirwa odhiyo mhando uye yakanakira kuzvitonga Ivo vanoita, pamwe ne "mashiripiti" ekuzvibatanidza otomatiki kune ako ese Apple zvishandiso, avo vanovatenga vanopfuura kugutsikana nazvo.
Zvisinei, vane chakakura chikanganiso, chisingakanganwirwi kune vazhinji: kudzora kwakashata. Apple yakasarudza Siri kudzora kutamba, asi isu hatisati tajaira kutaura nemubatsiri chaiwo, ndoda mumugwagwa kana kuruzhinji. NaIOS 11 Apple inotibvumidza kugadzirisa kutonga kweumwe neumwe mahedhifoni zvakazvimiririra, ichisiya zvimwe kana zvishoma zvinodiwa nevazhinji mune izvi. Tinotsanangura maitiro kuzviita.
Sezvo isu tichikuratidza muvhidhiyo, iri kukurumidza uye nyore kugadzirisa aya madhiraivhu. NeAirPod dzakabatana ne iPhone yedu tichafanirwa kuwana maSystem echigadzirwa uye nekutsvaga maAirPod edu mukati me «Bluetooth» menyu.. Sezvo zvishandiso zvakarairwa nearufabheti, ivo vanozoonekwa munzvimbo dzekutanga pane izvo zvinyorwa, uye isu tinobaya pa «i» inoonekwa kurudyi. Isu tinosimbirira kuti zvakakosha kuti maAirPods abatanidzwe neiyo iPhone kana iPad, zvikasadaro izvo zvingasarudzika zvingatarisike.
Tichingori mukati tichaona zvese zvingasarudzika zvatinopihwa, sekushandura zita kana kumisikidza kana kusangoona otomatiki nzeve. Muchikamu chepakati tinoona zvinodzorwa neAirPod yega yega, uye ipapo tinogona kusarudza yega yega, takazvimiririra, kusvika pasarudzo shanu, kusanganisira mukana wekuti hapana chinoitika. Ini pachangu ndaizosarudza sarudzo yekuenderera kumberi kana kumashure nzira, kubvira kutanga kana kumbomira kutamba kunoitika otomatiki paunobvisa mahedhifoni kubva munzeve yako. Isu tinoshaya mukana wekukwirisa kana kudzikisa vhoriyamu, izvo parizvino tichafanira kuramba tichishandisa Siri yacho.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 11 » Maitiro ekugadzirisa ekudzora AirPods muIOS 11